Maisie Williams ဟာ Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို နှုတ်ဆက်ရပြီလား....? - MoviesFan Movie News
Maisie Williams ဟာ Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို နှုတ်ဆက်ရပြီလား….?
HBO ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ Arya Stark ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေး Maisie Williams ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေတုန်းက သူမရဲ့ Instagram ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပုံလေးဟာ ရိုးရိုးတန်းတန်း ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ပုံမျိုးမဟုတ်ဘဲ သွေးစွန်းနေတဲ့ ဖိနပ်နှစ်ဖက်နဲ့ ခြေစုံရပ်နေတဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
“နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် Belfast မြို့ကြီးရယ်။ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် Arya ရယ်။ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် Game Of Thrones ရယ်။ ငါလေ… ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ စွန့်စားခန်းတွေဟာ ရောက်လာတော့မယ်” ပုံအောက်မှာ အခုလိုမျိုး သူမ ရေးထားခဲ့တဲ့ စာတွေကလည်း တစ်မျိုးပဲဆိုတော့ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ “ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Arya ဟာ သေသွားတော့မှာလား…? ဒါမှမဟုတ်ရင် Williams ဟာ Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ဆက်လက်ပါ၀င်ပြီး သရုပ်မဆောင်ရတော့ဘူးလား….? စတဲ့ ဇဝေဇဝါ အတွေးတွေနဲ့ ပဟေဠိတွေ ဖြစ်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း Williams ကတော့ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ အတိအကျ ထုတ်မပြောဘဲ ခုလိုမျိုး သဲလွန်စလေးကိုသာ ချပြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ် လာတဲ့အချိန်အထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ စောင့်စားပြီး ဘာတွေဖြစ်ပျက်လာမလဲဆိုတာကို သေချာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Williams အနေနဲ့ သူမရိုက်နေရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရင်တုန်းကလည်း အခုလိုပဲ သဲလွန်စလေးတွေ ပေးတတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်း Jimmy Kimmel Live အစီအစဉ်ထဲမှာ ပါ၀င်ခဲ့ရတဲ့ Williams ဟာ ခုလိုပဲ ပြောခဲ့ဖူးသေးတာမျိုးပါ။
“အရိုးသားဆုံး ပြောရရင်တော့ အဲဒါဟာ သိပ်ကို ဒဏ္ဍာရီဆန်တယ်ရှင့်။ ဇာတ်ကားရိုက်တာလည်း ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းနောက်ကိုပဲ လိုက်ပြီး အလိုလို သရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတော့တာပါပဲရယ်။ လူတိုင်းကလည်း ဒီအခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ သေချာလေ့လာနေမှာပါပဲ။ အဲဒါဟာ တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာကောင်းလှပါတယ်”
ဒါ့အပြင် Vanity Fair နဲ့ ဖြေခဲ့ရတဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ နောက်ဆုံးခန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေးခံရတုန်းကလည်း Williams က ဘာကိုမှ အတိအကျ မပြောဘဲ “အဲဒါဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ်ဆိုးဝါးတာပါပဲရှင့်” လို့သာ ဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်နဲ့ Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ Arya အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရင်း ဇာတ်ပို့ဆုတွေ ရခဲ့ဖူးတဲ့ Williams ဟာ အခုလောလောဆယ်မှာလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို သို့လောသို့လော အတွေးတွေနဲ့ မရိုးမရွဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာကတော့ အမှန်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: Las Vegas က Nightclub တစ်ခုမှာ မွေးနေ့ပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့ Kevin Hart
Next Post: တတိယမြောက် ရင်သွေးလေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ Michael Buble’